တရုတ်ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပါ - 0086 769 87717299
OEM, ODM ကြိုဆိုသည်
silkscreen လိုဂို (စိတ်ကြိုက်)
ထုတ်လုပ်မှု - ပထမအထောက်အကူပစ္စည်းများ
လျှောက်လွှာ: ဤပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးရေးကိရိယာအစုံသည် fဒါမှမဟုတ် အိမ်များ၊ ရုံးများ၊ စခန်းချခြင်း၊ ကားများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကားများ၊ အားကစား၊ လှေများ၊ လမ်းခရီးများ၊ စသည်တို့
အရေးပေါ်ကိရိယာကမမျှော်လင့်ဘဲအခြေခံနေ့စဉ်လွဲချော်မှုများနှင့်တောရိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးနယ်မြေရှင်သန်မှုစိတ်ဒဏ်ရာအခြေအနေများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်လကြာပင်လယ်လှေလှော်ခရီးစဉ်များ၊ အသေးအဖွဲအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မတော်တဆမှုများနှင့်နေ့စဉ်ကလေးငယ်မှားယွင်းမှုများပါ ၀ င်သည်။ ဤကိရိယာကိုသင်၏ကျောပိုးအိတ်၊ ယာဉ်လက်အိတ်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသေတ္တာထဲတွင်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။
ပစ္စည်း: 400D / 600D polyester သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
အရောင်: ရရှိနိုင် Red / Dark Grey / Aqua, စိတ်ကြိုက်
အရွယ်အစား: 10 x3x 13cm, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာသည်ချစ်စရာကောင်းသောအရွယ်အစား၊ 10x3x13cm၊ အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းခွဲသူများသည်မမျှော်လင့်သောအခြေအနေများအတွက်လိုအပ်သောအရာများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား၊ ပစ္စည်း၊ အရောင်၊ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုကိုသင်ရှာဖွေလျှင်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါမည်။
ဤထုတ်ကုန်အတွင်း၌ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးသောပစ္စည်းများမပါပါ။ ဤပစ္စည်းသည်တိုတောင်းသောကာလအတွက်အသုံးပြုရန်သေးငယ်သည်။ သင်သည်ပိုကြီးသောအရွယ်အစားကိုရှာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအခြားပစ္စည်းများအတွက်လင့်ခ်များကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
A1: ငါတို့စက်ရုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု / ဒီဇိုင်း၊ နမူနာ / အမြောက်အများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အကောက်ခွန်ကြေငြာခြင်း၊
Q2: ရေကြောင်းနည်းလမ်းများကော ?
A2: ရှန်ကျန်းဆိပ်ကမ်းရှိအမြန်ယာဉ်တန်း၊ လေကြောင်းဖြင့်၊ သမုဒ္ဒရာသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်။
Q3: ငွေပေးချေမှုကဘာလဲ စည်းကမ်းချက်များ?
A3: T / T, L / C ငွေပမာဏကြီးများနှင့်သေးငယ်တဲ့ပမာဏအတွက် Paypal, Wechat, Alipay နှင့်အခြားလူကြိုက်များသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
Q4: ဘာလဲ အကြောင်း ပေးပို့ခြင်း အချိန် / ထုတ်လုပ်မှု leadtime?
A4: နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှု> ၁၀,၀၀၀ pcs၊ ပို့ဆောင်ချိန်သည် ၂၀ မှ ၂၅ ရက်၊ တည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေးပို့မှုကိုထောက်ပံ့ရန်ဆေးထိုးစက် ၆၀ ကျော်ရှိသည်။
Q5: ငါတို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သလား လိုဂို ထုတ်ကုန်?
A5: သေချာပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ အနုပညာလက်ရာများကိုပေးပါ
A6 ။ သေချာပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်တင်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုနမူနာစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
Q7: သင်၏ MOQ (အနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက်) ကဘာလဲ။
A7: MOQ ဟာ ၃၀၀၀ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်လျှင်မြန်တဲ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့စတော့ရှယ်ယာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ။
Q8: ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား ဒီဇိုင်း?
A8: ဟုတ်ပါတယ်။ OEM နဲ့ ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မာတဲ့ R&D အဖွဲ့ရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထောက်ပံ့ဖို့ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေရှိတယ်။
ပုံဆွဲခြင်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ နမူနာများ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အရေးပေါ်ကိရိယာကမမျှော်လင့်ဘဲအခြေခံနေ့စဉ်လွဲချော်မှုနှင့်တောရိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးနယ်မြေရှင်သန်မှုစိတ်ဒဏ်ရာအခြေအနေများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်လကြာကြာပင်လယ်လှေလှော်ခရီးစဉ်များ၊ အသေးစားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မတော်တဆမှုများနှင့်နေ့စဉ်ကလေးငယ်များပါ ၀ င်သည်။
နောက်တစ်ခု: ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာ
လူနာတင်ယာဉ်ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီ Kit
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးရေးကိရိယာလေးထောင့်ကွက်
အရေးပေါ်ရှေး ဦး သူနာပြု Kit Bag Pack
ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာအစုံအလင်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်
အရေးပေါ်အတွက်ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာ
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပစ္စည်းများ FB003
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပစ္စည်းများ FB005
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပစ္စည်းများ FB006
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပစ္စည်းများ
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပစ္စည်းများ FB002
Guangdong SUMMIT MEDICAL PRODUCTS CO ။ , LIMITED
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 769 87717299